Dingana dimy raha te hivavaka amin'ny valiny famoronana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Dingana dimy raha te hambara amin'ny valim-bavaka
Dingana dimy raha te hambara amin'ny valim-bavaka
Isaia 65:24 Ary raha mbola miantso izy, dia hamaly aho; ary na dia mbola miteny aza izy, dia hohenoiko.
vavaka ho an'Andriamanitra dia toy ny dia ataontsika isan'andro. Tahaka ny tsy itovizantsika fijanonana bisy hafa, koa misy fijanonana bus ho solon'ny vavaka. Ara-dalàna, tsy miondrika isaky ny fijanonana bus isika satria nijanona ny mpamily fiara raha tokony hidina ny olona, ​​miala ny bus fotsiny izahay mandra-pahatongantsika any amin'ny toerana alehantsika.
Ny fotoana hampitsaharana ny vavaka dia rehefa tonga any amin'ny toerana halehantsika isika mandritra ny fotoam-bavaka. Matetika ny olona no manontany hoe Ahoana no ivavahako amin'Andriamanitra ?.
Ahoana no hivavaka amin'Andriamanitra?
Tahaka ny fifandraisanao matetika amin'ny namanao dia toy izany koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fomba tsy ahatsapanao fanelingelenana na fahatsapana fa manelingelina ny namanao mandritra ny resaka rehetra dia mitovy amin'ny tsy fahatsapana fikorontanana Andriamanitra isaky ny mifandray Aminy isika. Raha ny marina, Andriamanitra dia te-hanana fifandraisana tsy tapaka miaraka amintsika, fifandraisana izay tsy misy sakana.
Ny hany mila ataonao dia miresaka aminy fotsiny, Andriamanitra te-hiditra amin'ny asantsika isan'andro, eny fa na amin'ny sakafo hohanintsika, na akanjo anaovantsika ary izay zavatra hafa rehetra mahakasika antsika. Na izany aza, tsy miteny fotsiny izy hoe ahoana no tokony hisy fifandraisana tsy tapaka eo aminao sy Aminy. Azonao atao ny manomboka milaza zavatra amin'Andriamanitra manomboka androany, milaza ny fomba itiavanao ny andronao, milaza aminy zavatra izay tsy holazainao na amin'iza na amin'iza. Raha misy olona azonao itokisana dia mpanamboatra anao izany.
Avereno jerena ilay lahatsoratra momba ireo dingana tokony hatao mandritra ny vavaka. Fantatsika rehetra imbetsaka, ny vavaka dia momba ny lehilahy mangataka amin'Andriamanitra. Na izany aza, tsy mankany amin'Andriamanitra fotsiny ianao ary manomboka mangataka zavatra aminy. Na ireo ray aman-drenintsika eto an-tany aza dia hananatra antsika raha sendra azy ireo isika ary manomboka mitaky zavatra raha misy fomba fanaovana zavatra eo amin'ny tontolon'ny olombelona mety maty, misy ny fomba fanaovana zavatra eo amin'ny sehatry ny fanahy.
Ka inona ary ireo dingana amin'ny Vavaka?
Tokony ho fantatrao fa raha manomboka vavaka, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny fankasitrahana. Eny! Andriamanitra no Raintsika any an-danitra, saingy tsy tokony hanome antsika fahafaham-po ahazoana manao izany Andriamanitra hanao izay hataony ho antsika satria zanany isika. Raha izany no izy, dia ahoana ireo izay manam-panahy kokoa, mazoto kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra nefa efa maty, na ireo izay tsy mankafy ilay Fahasoavana mitovy aminao. Noho izany dia tsy maintsy mitondra antsika amin'ny fahatsiarovan-tena izay ankafizintsika ny FAHASOAVANA.
Ka isaky ny manatona an'Andriamanitra amin'ny vavaka isika, ny zavatra voalohany tokony ataontsika dia ny manome fisaorana azy noho ny fahasoavan'ny Benevolent izay nankafizantsika, tsy voavonjy amin'ny asan'ny tanantsika fa amin'ny Fahasoavana.
2. Miaraha mivavaka
Ny dingana lehibe hafa raisina amin'ny vavaka dia ny mianatra hivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andrimanitra dia mitondra ny fampanantenany rehetra amin'ny maha-zanany antsika, mpandova ho amin'ny lovany amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Ny bokin'ny 1 Jaona 5: 14-15 Izao no fahatokiantsika fa manatona an'Andriamanitra: raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na inona na inona angatahintsika, dia fantatsika fa manana izay angatahintsika isika. ” Na inona na inona zavatra hangatahintsika mifanaraka amin'ny sitrapony, dia hataon'Andriamanitra ho antsika izany.
Noho izany, raha tokony hijanona ora maromaro ho solon'izay vavaka kely tsy misy valiny amin'izany dia afaka manomboka mianatra ny fomba fivavaka isika amin'ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra. Mampahatakatra antsika ny soratra masina fa manaja ny teny rehetra izay aloaky ny vavany Andriamanitra ary tsy hisy hiverina aminy intsony raha tsy efa nahatanteraka ny antony nanirahana azy.
3. Miaraha mivavaka
Moa ve ianao efa nahita ilay ampahany ao amin'ny soratra masina izay milaza na inona na inona zavatra angatahinay amin'ny vavaka, finoana, ho azonao. Ny bokin'ny Mathew 21:22 dia mahatonga antsika hahatakatra ny herin'ny finoana mandritra ny vavaka.
finoana dia votoatin'ny zavatra antenaina ary porofon'izay zavatra tsy hita. Tsy mila miandry fisehoan-javatra isika alohan'ny hanombohantsika miaina ny tena zava-misy fa efa azontsika ny zavatra nangatahintsika ho solon'ny vavaka.
4. MANGALATRA FIVORIANA ALOHA
Izany dia mora tokoa amin'ny miaiky ny finoana, na izany aza dia henjana tokoa ny miaina ny finoana. Raha vao manapa-kevitra ny hiasa am-pinoana ny lehilahy iray, hampiditra ny tahotra. Matahotra ny tsy fahombiazana, tahotra ny fisalasalana. Milaza ny soratra masina fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy manome tahotra isika, fa fanahin'ny zanaka hitomany an'i Abba Ray.
Tsy avy amin'Andriamanitra ny tahotra, indrindra amin'ny toerana fivavahana. Ny fahatahorana dia mitondra fisalasalana, tadidio ny tantaran'ny Apôstôly Peter rehefa nasain'i Kristy nandeha teo amboniny teny ambony rano i Kristy. Tamin'ny fotoana niovan'ny masony tamin'i Kristy dia nilentika ny tahotra ary avy hatrany dia nanomboka maty izy. Manimba ny finoan'ny olona ny tahotra, mahatonga ny olona tsy hino izany.
5. FINOANA, FINOANA
Ny mbola miaina amin'ny finoana mandritra ny vavaka dia manaporofo fa efa nahazo sy resinao ianao. Misy hery be dia be amin'ny lela. Ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny fanambarana dia milaza ary izy ireo dia nandresy azy tamin'ny ran'ny zanak'ondry ary tamin'ny tenin'ny fijoroana ho vavolombelona nataony. Misy mila anao miaiky ny vavanao ary manaporofo fa mandresy ianao. Tsarovy ny andinin-teny izay milaza, ambarao izany dia haorina.
Rehefa mijoro ho vavolombelona ianao dia mitaky izay anao voalohany. Tsara homarihina fa ny zavatra rehetra ilaintsika mba hiroborobo eo amin'ny fiainana dia omena amin'ny alàlan'i Kristy izay nidina teo amin'ny hazofijalian'i Kalvary. Na izany aza, dia manana fahavalo iray iraisana isika izay ny devoly. Ny devoly manandrana manala ny zontsika amin'ny alàlan'ny tahotra. Na dia izany aza, raha mijoro ho vavolombelona isika dia mitaky izay efa noraisin'ny fahavalo tamintsika.
Misy dingana dimy azonao atao amin'ny vavaka mba hahazoana vokatra haingana. Tokony hanomboka hampiasa ireo dingana ho amin'ny vavaka mahasoa ianao ary hizara ny fijoroanao ho vavolombelona.
Previous lahatsoratraVavaka Atao Ny Ray Aman-dreny Tokony Holazaina Ho An'ireo Zanany Amin'ny Oniversite
Next lahatsoratraVavaky ny fanantenana
Mary 13 Janoary 2020 Amin'ny 1:22 hariva
Misaotra anao noho ny fahalalana nizara pasitera. Nianatra aho ary hampiasa izay nianarako aho. Hotahin'Andriamanitra anie ianao.
Teboka vavaka mba handeha amin'ny fitiavana
30Ny vavaka momba ny fahasoavana sy fahasoavana
Teboka vavaka hanoherana ny tsy rariny ara-tsosialy